NgoNovemba 2020-Funda ukuRhweba
IJamani 30 (DE30EUR) ikwiZantsi lokuHamba, ngoMeyi ukuwela kwinqanaba le-13153.70
30 Novemba 2020 | Ukuhlaziywa: 30 Novemba 2020
Isalathiso kukunyuka okuphezulu kodwa sijamelene nokumelana kwinqanaba le-13200. Kuya kufuneka ukuba ifikelele ekudinweni okuphezulu njengoko ijongene nokwaliwa. Ngomhla we-10 kuNovemba, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa ukuphindiselwa kwe-Fibonacci eyi-88.6%. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.1129 kwaye mhlawumbi sibuyiselwe umva.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso sikwinqanaba lama-64 leSalathiso saMandla esiNxulumene nesiKhokelo sexesha lama-14. Oku kubonisa ukuba sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Ngomhla kaNovemba 30 ukwehla, umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8%. Oku kuthetha ukuba isalathiso siya kuwa kwaye sifike kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo.
I-DE30EUR inokuthi ithathe intshukumo esezantsi. Isalathiso sithengisiwe kwingingqi ethengiweyo. Abathengisi banokuvela batyhalele amaxabiso ezantsi. Nangona kunjalo, kwimarike ehamba phambili, imeko egqithisileyo ayinakubamba. Yiloo nto isibini siya kuqhubeka sinyuka.
Qaphela: Funda2.Urhwebo alunguye umcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
Abahlalutyi kwiJPMorgan Projekthi eNtsha yokuhla kweBitcoin
Ngaphandle kokuvuseleleka kwakutshanje kwi-Thanksgiving "yokubulala" ngeBitcoin (BTC), abahlalutyi abavela kwiJPMorgan Chase & Co balindele ukwehla okukhulu kwi-cryptocurrency kungekudala.
Isicwangciso-qhinga sichaze ezinye zezinto ezinokudlala indima ebalulekileyo kungekudala kwi-cryptocurrency yokubonisa.
Uhlalutyo lwamva nje lweJPM, olukhokelwa nguNikolaos Panigirtzoglou, luqaphele ukuba ingozi yokuBonga iyisusile "I-froth yangaphambili kwindawo yokuthengisa ngokukhawuleza." Nangona kunjalo, uhlalutyo lubonisa ukuba iBitcoin isenokubona ukwehla okutsha.
Ngaphandle kwento yokurhweba ngamandla, abenzi beqhinga baqhubekeka bachaza ezinye izizathu ezichaphazela ukuguquguquka kwamaxabiso. Enye yezinto ezinjalo ngamarhe ajikelezayo kumzi-mveliso malunga neminye imigaqo engathandekiyo ecetywayo ngolawulo lukaTrump.
Enye into ebalulekileyo ebonakaliswe ngabahlalutyi beJPM yindima ebalulekileyo yeGreycale kunye neGreycale Bitcoin Trust yayo enokuba nayo kwintengiso. Ifemi yolawulo lwengxowa mali ye-crypto ithathwa njengeyona nkampani inokuthenjwa kubatyali zimali abafuna ukufunyanwa kwiBitcoin nakwezinye izinto zexabiso ledijithali.
Ukuthembeka kwi-crypto firm kubonakalisiwe nge-2020 njengoko i-Grayscale ichaze amanani okophula irekhodi, ikota emva kwekota. Iiasethi zenkampani eziphantsi kolawulo ziye zanyuka zangaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi kwiinyanga nje ezili-12, iGreycale Bitcoin Trust inesabelo esikhulu.
Oko bekuthethile, abahlalutyi bathi ukuba i-GBTC ayithandeki kubatyali mali, inokuba nefuthe elibi kwiBitcoin, ekukholeleka ukuba iyeyona ithandwayo phakathi kwabatyali mali beziko.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela-nge-30 kaNovemba
I-Bitcoin irekhode i-boom enkulu idlulileyo kwi-YTD yayo ephezulu kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, ibonisa ukuba imali ye-cryptocurrency ibuyile ngamandla. Oko kwathethi, kufanelekile ukuba silindele ukuba i-cryptocurrency ebekiweyo ibeke ngaphezulu kwe- $ 20k yayo ngalo lonke ixesha nangaliphi na ixesha kungekudala.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 19,500, $ 19,880, kunye ne- $ 20,000. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 18,800, $ 18,400, kunye ne- $ 18,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 571 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 357 billion
Ulawulo lweBitcoin: 62.5%
I-EUR / CHF ikwiZantsi lokuHamba, ukuLulwa kobuso kwinqanaba le-1.0850
Esi sibini sinyukele kwinqanaba le-1.0822 kwaye sijamelene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu kutshanje. Ngomhla kaNovemba 10 phezulu; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Oku kuthetha ukuba isibini siya kufikelela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci. Ngamanye amagama, inqanaba eliphezulu le-1.0994.
Iibini zikwinqanaba lama-66 leNdawo yamaXabiso aMandla aNxulumene naMandla ixesha eli-14. Kuthetha ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso siphinde saqala phantsi ukwehla. Iziphatho zezibane namhlanje zibonisa imisonto emide ebonisa ukuba kukho uxinzelelo lokuthengisa olomeleleyo kumanqanaba aphezulu. NgoNovemba 27 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ibonisa ukuba isibini siya kufikelela kwinqanaba le-1.618 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba eliphezulu le-1.0849.
I-EUR / CHF-1 itshathi yeyure
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMAs zijike ziye phezulu zibonisa uptrend. Iibini zingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili kwaye siyarhweba kwingingqi ethengiweyo.
I-EUR / CHF ikukunyuka kwaye ngoku ithengisa kwinqanaba le-1.0844. Okwangoku ijongene nokwaliwa kwinqanaba le-1.0850. Uhlalutyo lwesixhobo seFibonacci lubonakalise ukunyuka okuphezulu kwinqanaba le-1.0994.
IiRekhodi zeGolide ezona ziThotyiweyo ngeNyanga kwiminyaka emine njengoko iMood Market ihleli ilungile
Igolide (i-XAU / i-USD) iqhubekeke nokuhla kwayo kwiseshoni yase-Yurophu yokuqala ngoMvulo kwinto enokuthi ithathelwe ingqalelo njengokwehla kwayo kakhulu kwiminyaka emine. Ukuthengiswa kwakutshanje kubangelwe kukuvuselelwa komdla wokutya kwabatyali zimarike, njengoko ithemba lezitofu zeCOVID-19 livuselela amathemba okubuyiselwa kwezoqoqosho kwihlabathi liphela.
Ukuza kuthi ga ngoku, intsimbi etyheli ilahlekile malunga ne-5.7% ngokonyusa ngoNovemba, irekhodi elehla ngenyanga ukusuka ngoNovemba 2016.
Ngapha koko, kukholelwa ukuba isilayidi samva nje esingezantsi kwesibalo esibalulekileyo se- $ 1800 sibangele ukuthengiswa ngokutsha kwempahla yorhwebo. Abathathi-nxaxheba kwimakethi ngoku bajonge kubungqina bendibano nguSihlalo weFed uJerome Powell, ocwangciselwe ukubanjwa kamva kule veki. Igolide ithathwa njengekhaka elilungileyo ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso kunye nokuhla kwe-fiat.
Okwangoku, abahlalutyi baseCitibank bahlengahlengise uqikelelo lwamaxabiso egolide ka-2021 kunye noqikelelo lwabo lokungena kwe-ETF yegolide ukuya kwicala elisezantsi, njengoko uqoqosho oluphucukileyo lubonisa ithemba elifanelekileyo lokuphola.
Abahlalutyi baqaphele ukuba utyalomali lwe-net kwii-ETF zegolide kufuneka zibethe iitoni ezingama-800 ngo-2020, iitoni ezingama-75 kufutshane nokuxelwa kwazo kwasekuqaleni kunye nama-50% asezantsi kwakhona kunyaka olandelayo. Okwangoku, bahlengahlengise ithagethi yabo yenkxaso yexesha elikufutshane kwisinyithi esingavumiyo ukuya kwi-1700 yeedola, bepeyinta umbono omdaka wethemba lexesha elikufutshane legolide.
Nangona kunjalo, abahlalutyi baseCitibank balindele i-rally ngaphezulu kwenqaku le- $ 2000 kwiinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu ezizayo.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - ngo-Novemba 30
I-XAU / i-USD Bias enkulu: Ukukhupha
Amanqanaba okubonelela: $ 1777, $ 1792, kunye ne-$ 1800
Amanqanaba okufuna: $ 1764, $ 1748, kunye ne-$ 1718
Ipeyinti yethu yeyure yeyomfanekiso omdaka wegolide, njengempahla, inokubonakala ngathi ithambeka isiya kumjelo wehla kumjelo wethu. Okwangoku, ukuwa ngaphantsi kwamanqaku ayi- $ 1764 kunokukhawulezisa ukwehla kwegolide kunye nokugqiba ithemba elincinci elishiyekileyo lokufumana kwakhona ngaphambi kokuphela konyaka.
Oko kwathethi, kuphela kukuphinda ubuye ngaphezulu kwe-1800 yeedola ezinokuqinisekisa ukuvuselelwa kwesantya kwi-XAU / USD.
Imizamo ye-EURUSD yokufumana ukuya kwinqanaba le-1.20 njengoko i-Dollar Falls iphakathi kweThemba lokuGonya
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 30
I-EURUSD iqhubekile nokujikela phezulu kwangoko ngenzame yokubaleka amanqaku e-1.20 acebisa ukuba ixabiso lisendleleni eya kwi-2020 yayo yeminyaka emi-2 kwinqanaba le-1.2011 emva kweentsuku zoluhlu. Idola yaseMelika nayo ibikunyawo lwangasemva njengoko iindaba ezivela kumbono wokugonya zikhuthaze abatyali zimali ukuba bathathe inzuzo kwizitokhwe zaseMelika.
Amanqanaba okumelana: 1.2150, 1.2050, 1.2011
Amanqanaba enkxaso: 1.1900, 1.1800, 1.1740
I-EURUSD iyaqhubeka nokuthengisa ngaphezulu komndilili wokuhamba wemihla ngemihla we-5 kunye ne-13 kodwa i-Relative Strength Index ijongene nezalathiso ezingama-70 ezibonisa iimeko zokuthenga ngaphezulu. Olu phuhliso longeza kwimeko yokulungiswa ezantsi.
Ngaphezulu kwenombolo ejikelezayo yenqanaba le-1.20, inqanaba elibalulekileyo lokubukela yincopho ye-2020 ye-1.2011. Okwangoku, inkcaso yokuqala elandelayo ilindelwe kwinqanaba le-1.2050. Ngaphezulu kwesithintelo, isibini esidumileyo semali emhlabeni sibuyele kumanqanaba okugqibela ukubonwa kwi-2018, ngenqanaba le-1.2095 njengethagethi elandelayo.
I-intraday bias kwi-EURUSD ihlala ikwicala lokuphinda uzame inqanaba eliphezulu le-1.2011. Ukophuka okuzinzileyo kwenqanaba eliphezulu le-1.2011 kunokuphinda kulibuyise inani elipheleleyo le-1.0635 yenqanaba eliphantsi. Ukuqhubela phambili, injongo elandelayo kukuqikelelwa kwe-61.8% ye-1.0635 ukuya kwi-1.2011 kumanqanaba ukusuka kwi-1.1612 kumanqanaba e-1.2165.
Kwicala elisezantsi, nangona kunjalo, ulwaphulo lwenqanaba le-1.1800 lenkxaso inokutshintsha i-intraday bias iye kwicala elingezantsi, ukwandisa imeko ukusuka kwinqanaba le-1.2011 ngesinye isigaba sokuwa. Konke, kuphela ikhefu le-1.1900 yokuqala yeenombolo ezijikelezayo ezisezantsi ezinokubonisa ukuba umngcipheko wokuqhubeka kwamandla e-EUR uphelile.
Ixabiso lesilivere: XAGUSD Slumps Under $ 22.00 Level Amid In Economic Recovery Optimism
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Novemba 30
Isilivere (i-XAGUSD) iqala kwakhona ukuthengisa kwiveki ephelileyo phakathi kwethemba lokuhla kwezoqoqosho njengoko intsimbi emhlophe iyehla phantsi kwenqanaba lama- $ 22.00. Nawuphi na umzamo ophindayo uya kuhlala ungekho nzulu ngaphantsi kwendawo yokuhlangana ejikeleze inqanaba lama- $ 23.50.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 26.00, $ 23.50, $ 22.83
Amanqanaba enkxaso: $ 21.66, $ 19.65, $ 18.37
Ngokubanzi, umngcipheko weXAGUSD uhlala ubambekile kwicala elisezantsi, njengoko ixabiso liphule inqanaba lobungakanani bengqondo kwi- $ 22.00. Ujoliso olulandelayo oluchaphazelekayo lubonwa kwinqanaba lenkxaso ye- $ 21.66. Inqanaba kwi-21.66 yeedola iya kuba kwinqanaba lokubetha iibhere. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iimeko ze-RSI ezigqithileyo zinokucela umngeni kwiibhere zesilivere ezijikeleze inkxaso yenkxaso yokunyuka, kwinqanaba le-21.89 ephezulu ye-intraday.
Isinyithi esimhlophe ngoku sisebenza ngobuthathaka kancinane kwinqanaba le- $ 22.25 ngelixa lizama ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Kwelinye icala, ukuba ixabiso lesilivere lithengisa ngaphaya kwe-23.50 yenqanaba lendawo yokuhlangana, i-traction ephezulu inokufumana isantya kwaye isebenzise ii-odolo zokuthenga ezibonakala ngathi zibangela ukunyuka okungxamisekileyo kwesilivere ukuya kwinqanaba eliphezulu le- $ 26.00.
Kwixesha elisezantsi, uhlalutyo lobuchwephesha lubonisa ukuba i-XAGUSD iqhekeze ijelo elisezantsi kwaye inokuba phakathi kwamanqanaba okumelana nekota kufutshane ne- $ 22.83 kunye nexesha elifutshane eliphantsi kwinqanaba le- $ 21.66. Naluphi na uqhekeko olunje olusezantsi luya kugcina isinyithi esimhlophe esithengisa kwinkxaso elandelayo yenqanaba le- $ 19.65.
Ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 22.83 elinokuzama ukubuyela kwinqanaba le- $ 23.50. Isilivere inokuphinda ibuye ngokugqithileyo nakwezorhwebo ibuyele kwii-23.00s zeedola kodwa isathengisa ngelahleko ezingaphezulu kwe-2.0% ngosuku. Imeko enokwenzeka iya kuba zizikhundla ezimfutshane ezingaphantsi kwe- $ 23.50 eneethagethi kwi- $ 21.66 kunye ne- $ 21.00 amanqanaba okwandiswa.
I-EUR / GBP ijongene nokwaliwa kwinqanaba elingu-0.8990, ukuHamba okuPhezulu kunokwenzeka
Iponti isenza ukuphakama okuphantsi kunye nezantsi. Okwangoku, iyawa emva kokwaliwa kwinqanaba le-0.8990. Ukusukela nge-9 kaNovemba, abathengi abakwazanga ukutyhala ngaphezulu kwenqanaba le-0.8990. Ke ngoko isikiti sinokuwela.
I-50-yeentsuku kunye ne-21-yeentsuku ze-SMAs zithambekele ezantsi zibonisa ukwehla. Iibini zikwinqanaba lama-49 leSalathiso samandla esiNxulumeneyo sexesha lesi-14.Ipawundi ingezantsi komgca osembindini wama-50 kwaye ikummandla wedowntrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-EUR / GBP sisezantsi. Iibini ziyawa emva kokujongana nokwaliwa kwinqanaba le-0.8990. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kuNovemba ezantsi; umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-23% yeFibonacci. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba iponti inokuthi iwele kwinqanaba le-50 Fibonacci extensions. Eli linqanaba eliphantsi le-2.0.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ecaleni. Isibini singaphantsi kwama-75% kuluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba iponti ikwimeko ye-bearish. Esi sibini sihamba phantsi.
Umgangatho oqhelekileyo wesibini se-EUR / GBP si-bearish. Okwangoku, iponti iyawa. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, iponti iya kuwa kwaye ifike kwinqanaba le-0.8766.
I-XRP / i-USD ngoMeyi inganyusa ukuqhubela phambili kwiNqanaba eli-0.79 le- $
Uhlalutyo lwamaxabiso eveki ngeXRP-Novemba 30
Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziyaqhubeka nokulawula imakethi ye-XRP / USD, ixabiso linokunyuka liye kwi-0.73 ye- $, i- $ 0.79, kunye ne- $ 0.88 yamanqanaba. Kwicala elisezantsi, ixabiso linokufumana amanqanaba enkxaso kwi- $ 0.61, $ 0.55, nakwi- $ 0.49.
Amanqanaba okumelana: $ 0.73, $ 0.79, $ 0.88
Amanqanaba enkxaso: $ 0.61, $ 0.55, $ 0.49
I-XRP / i-USD iphantsi koxinzelelo lweenkomo njengoko ingqekembe yemali ingqokelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.79. Nge-24 kaNovemba, ithambekele ekuvavanyeni inqanaba elikhankanyiweyo kodwa inqanaba liphethe ixabiso kwaye labuyisa ukubuyisa inqanaba lexabiso le- $ 0.44. Ukuqwalaselwa okwenziwe kwitshathi yemihla ngemihla; Ixabiso leXRP ngoku lizama ukuphinda liqhubeke umkhwa we-bullish kwinqanaba le- $ 0.61. Inqanaba lokuchasana le- $ 0.73 yenqanaba lamaxabiso kunokwenzeka ukuba liphinde libuye kwakhona kwiindlela ezimbalwa ezilungileyo ezizayo ukuba imeko yentengiso iyaqhubeka nokunyuka.
Itshathi yemihla ngemihla yeXRPUSD, nge-30 kaNovemba
Isalathiso sobuchwephesha i-RSI (14) sihamba ngaphezulu kwenqanaba lama-60 sibonisa ukuba intengiso inokuqhubeka nokulandela imeko ephezulu. Ukujonga itshathi yemihla ngemihla, sinokubona ukunyuka kwenkunzi kweenkomo. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziyaqhubeka nokulawula imakethi ye-XRP / USD, ixabiso linokunyuka liye kwi-0.73 ye- $, i- $ 0.79, kunye ne- $ 0.88 yamanqanaba. Kwicala elisezantsi, ixabiso linokufumana amanqanaba enkxaso kwi- $ 0.61, $ 0.55, nakwi- $ 0.49.
I-XRP / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: yokunyusa
I-XRP iyonyusa kwimbonakalo yexesha eliphakathi. Ukusebenza kwengqekembe kuya kuphakama ngenxa yokuphindaphindeka kwemvakalelo ebangele ukuba intengiso inyuke kakhulu. Ngamanye amagama, ixabiso belithambile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Imarike okwangoku ilandela i-uptrend kunye nethuba lokubeka ukuseta urhwebo lokuthenga kunokufumaneka.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-XRPUSD, nge-30 kaNovemba
Ixabiso lingaphezulu kwamanqanaba okumelana namandla (ama-9-amaxesha e-EMA kunye nama-21-amaxesha e-EMA) edityaniswe nesalathiso samandla esalatha kumanqanaba angama-50 abonisa ukwanda kwexabiso.